Wararka - Mabda'a Shaqada ee Dareemka Infrared Thermopile - Saamaynta Heerkulbeegga
Mabaadi'da Shaqada ee Dareemka Infrared Thermopile - Saamaynta Heerkulbeegga
Saamaynta Heerkulbeegga (Saamaynta Seeebeck)
Haddii laba walxood oo kala duwan A iyo B kuwaas oo leh walxo isku mid ah iyagoo leh hawlo shaqo oo kala duwan, marka la isku xiro dhamaadka kulul (Xarunta Isgoysyada Kulul), oo la furo dhamaadka qaboobaha (Aagga Isgoysyada Qabow), iyo heerkulka heerkulka u dhexeeya kulaylka. dhamaadka iyo dhamaadka qabow waa ΔTHC, marka dhamaadka qaboobaha waxaa jiri doona heerkulbeegga Vbaxay.
Marka shucaaca infrared-ka ee dibadda uu iftiimiyo aagga nuugista ee qalabka wax baadha, aagga nuugista wuxuu nuugaa shucaaca infrared wuxuuna u beddelaa tamarta kulaylka.Heerkulka qaboojiyaha ayaa ka dhalan doona aagga isgoysyada kulul iyo aagga isgoyska qabowga.Iyada oo loo marayo Saamaynta Seebeck ee walxaha heerkulbeegga ah, heerkulbeegga heerkulku waxa loo rogi karaa soosaarka calaamadda danab.
Saamaynta kuleyliyaha (Saamaynta Seeebeck)
Shaandhayso(sifada filtarka IR waa ikhtiyaari): dooro band infrared, ka fogow hirarka iftiinka kale si uu u saameeyo dareenka.
Kab: qaab dhismeedka farsamo ee taageeraya ee filter IR.
Chip TPS: in la dareemo calaamada infrared ee dhexmarta shaandhada IR.
Madax: qaab-dhismeedka farsamo ee taageeraya ee chip.
Chip Thermistor(Ikhtiyaar): la soco heerkulka aagga isgoyska qabow ee chip TPS.
Qalabka wareegga wareegga ASIC(ikhtiyaar ah, soosaarka calaamadda qaboojinta): qaboojinta calaamadda soosaarka analoogga ee chip TPS.
Waxaa la arki karaa in mabda'a shaqada ee chip shidma thermopile uu yahay laba jeer beddelka jireed ee "kulka-kulka-korontada".Shay kasta oo ka sarreeya eber dhammaystiran (oo uu ku jiro jidhka bini'aadamka) wuxuu soo saaraa fallaadhaha infrared, haddii dooro hirarka dhererka ku habboon ee filterka infrared (5-14μm daaqada band), marka walxaha xasaasiga ah ee infrared ee chip uu nuugo kulaylka infrared oo iftiinka u beddelo kulayl. , taasoo keentay in kor u kaca heerkulka gobolka nuugista, farqiga heerkulka u dhexeeya aagga nuugista iyo aagga isgoysyada qabow waxaa loo beddelaa wax soo saarka danab iyada oo boqolaal set oo ah isku xirka thermocouples micro, iyo signal infrared la ogaado ka dib wax soo saarka danab waa. dhalin
Marka la eego qaab-dhismeedka, Dareemaha infrared-ku-salaysan ee Sunshine Technologies waa ka duwan yahay alaabta caadiga ah, qaab-dhismeedkiisu waa "godan".Waxa jirta dhibaato farsamo oo muhiim u ah qaab-dhismeedkan, taas oo ah, sida loo dhigo lakabka 1μm filim ganaax qaro weyn oo ah aag kaliya 1 mm.2, iyo in la hubiyo in filimku uu yeelan karo qiyaasta beddelka ku filan si loogu beddelo iftiinka infrared-ka soo-saarka signalka korantada, si loo buuxiyo shuruudaha xoogga signalada ee dareemayaasha.Waa si sax ah sababtoo ah Tiknoolajiyada Qorraxdu waxay qabsadeen oo ay qabsadeen tignoolajiyadan udub-dhexaadka ah inay jebin karto keli-taliska muddada-dheer ee alaabta shisheeye hal istaroog.